I-Aprimo kunye ne-ADAM: Ulawulo lweeasethi zeDijithali kuTyelelo lwabaThengi | Martech Zone
I-Aprimo kunye ne-ADAM: Ulawulo lweeasethi zeDijithali kuTyelelo lwabaThengi
NgoLwesibini, Agasti 22, 2017 NgoLwesithathu, Agasti 23, 2017 Douglas Karr
I-Aprimo, iqonga lokuthengisa, libhengeze ukongezwa kwe IDAM Management Asset Digital isoftware kwiminikelo yayo esekwe kwilifu. Iqonga liye lamkelwa njengenkokeli kwi I-Forrester Wave ™: Ulawulo lweeasethi zeDijithali kumava abaThengi, i-Q3 2016unikezela oku kulandelayo:
Umdibaniso wendalo engenamthungo ngokudibanisa i-Aprimo Integration Framework- Amanqaku anokufumana ukubonakala okungcono kunye nokunxibelelana ngakumbi ngaphandle komthungo kwindalo yentengiso kunye nezibonelelo ezongeziweyo zesakhelo sokudibanisa esivulekileyo nesimanyeneyo kwilifu.
Ukudibana kolawulo lwezixhobo zokuthengisa (MRM) kunye ne-DAM - Ngokudibanisa uLawulo lweAsethi yedijithali ye-Aprimo kunye nenqanaba elikhokelela kwimveliso yokuthengisa ye-Aprimo, abathengisi ngoku banokufikelela kuzo zombini izisombululo ezisekwe kwilifu, ezivumela ulawulo lokuhamba komsebenzi olungalinganiyo kunye nentsebenziswano.
Ukufikelela ngokukhawuleza kuphuculo olwenziweyo - Abathengi banokufikelela ngokuqhubekekayo kuphuculo lweqonga lwamva nje ngokusebenza okutsha okukhupha ngokuzenzekelayo kunye nexesha elifanelekileyo.
Ixesha elikhawulezayo lokuxabisa ngaphandle kokuphazamiseka kwishishini- Abathengisi banokuphakama basebenze kunye no-Aprimo kwiiveki nje ezimbalwa. Kwaye banokubona izibonelelo zotyalo-mali lwabo ngelifu ngokukhawuleza kunye nendlela yokusebenza ye-Aprimo ekhawulezayo yexabiso lokuvula indlela enciphisa ixesha lokuthengisa-ukusuka kwiinyanga ukuya kwiiveki.
Ukhuseleko olukumgangatho wehlabathi, ukuthembeka, kunye nokusilela okuxhaswe nguMicrosoft Azure- Isiseko sefu sika-Aprimo siyakhelwe-injongo ukusuka emhlabeni ukuya phezulu, ukubonelela nge-24/7 eyona nto ikwinqanaba eliphezulu kukhuseleko lwehlabathi, ukusebenza, kunye nokuthembeka ngezibonelelo ezongeziweyo kwilifu, exhaswa ngu Microsoft Azure.
Umhlalutyi weForrester uNick Barber uphawule ngendlela abathengisi abaya kulifumana ngayo ixabiso ekufumaneni kuka-Aprimo isoftware ye-ADAM kutshanje kwinqaku lakhe elinesihloko Ukufunyanwa kuka-Aprimo kweempawu zesoftware yeADAM yokudityaniswa kweNtengiso:
Isibonelelo esicacileyo sokudityaniswa kukuba ngoku abathengisi baya kuba nesisombululo esinye kuwo wonke umxholo wobomi bomxholo.
Ngoku, ngokuhamba kwayo ukuya kwilifu, amandla ka-ADAM kwi-DAM (uLawulo lweeAsethi zeDijithali) utshatile kunye nezibonelelo zelifu, ukubonelela abathengisi kwinqanaba lokushishina, ulungelelwaniso kunye nokusebenza.
Sikubudala bomthengi. Imibutho yanamhlanje ikhuphisana namava abathengi abanokubonelela. Nangona kunjalo, abathengisi bagcwele ulwandle lomxholo bezama ukuhambisa amava afanelekileyo kumajelo alungileyo. Izibonda ziphezulu kubathengisi. Kodwa ngo-Aprimo, ngoku banesisombululo esinye esisekwe kwilifu sokulawula yonke imijikelezo yobomi bomxholo, kunye nokubanakho kokulinganisa ngokungenamthungo kunye nokutshintsha kwihlabathi lanamhlanje ledigital. UJohn Stammen, umphathi we-Aprimo
Kwakhona kufakwe kwi-SaaS entsha i-Aprimo Management Content Management. Ukudityaniswa ngokupheleleyo ne-Aprimo DAM, i-Aprimo ivumela imibutho yehlabathi ukuba ilawule ulwazi lwabo ngemveliso kunye nomxholo wentengiso kwindawo enye ukukhawulezisa ukwaziswa kwemveliso, ukulungelelanisa ukudalwa komxholo, kunye nokucwangciswa kwamava omxholo oqhutywa yimveliso kwilifu.
Amashishini amashishini athatha amashishini kukhathalelo lwempilo, indlela yokuphila yabathengi, kunye nokukhanyisa, kubandakanya imibutho efana nePhillips, i-ASOS kunye neDepho yasekhaya, sele bekhethe uLawulo lweeAsethi zeActimo ze-Aprimo.
Iinkcukacha ezithe kratya kuLawulo lweeAsethi zeA Aprimo
tags: Adamiprimoulawulo lweasethi yedijithaliASOSukulawula impahlaidamaUlawulo lwee-asethi zedijithaliIzinto zedijithaliidepho yasekhayaPhillips
Uyidibanisa njani imixholo yakho ye-B2B yokuvelisa iiNkokeli ngeNetLine Portal